theZOMI: [aurorageneration] Re: " ပြည်ထောင်တည်ဖို့ စုကြစို့ ။ အပတ်စဉ်တိုင်း ဆွေးနွေးစို့ "
[aurorageneration] Re: " ပြည်ထောင်တည်ဖို့ စုကြစို့ ။ အပတ်စဉ်တိုင်း ဆွေးနွေးစို့ "
shameful Soe Wai ,
He lied himself asaBuddhist but the words he said is likeapiggy shit.
So he actually isaMuslim .Whatever he said , we can't recognize.
2013/3/30 kdar kdar <kdar600@gmail.com>
မြန်မာနိုင်ငံအရိပ်.နေပြီး မြန်မာလူမျိုးကို ဆော်ကား၊ အသိညဏ်နိမ်.တဲ.ခွေးတိရစ္ဆာန်တော
င် သူ.သခင်ကို ပြန်မဟောင်တတ်ဘူး ၊ ဟူးးးးးးးးးး ခုတော. တိ၇စ္ဆာန်ထက်နိမ်.တဲ.ခွေး ကုလားတွေက သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစား ခွေးစကားပြောတာမဆန်းပါဘူးးးး ဘင်္ဂလီကုလားလောက် စုတ်ပဲ. ချီးပေတဲ. တိရစ္ဆာန် ကမ္ဘာမြေမှာမရှိဘူးးးးးးးးးခွေးထက်နိမ်.တဲ. ကုလား တွေ.... ၀က်ချေးပဲစားတော. ..........
2013/3/29 soe wai <atawdar@gmail.com>
ဗုဒ္ဓ ပြောခဲ့တာ အဖြေကနှစ်ခုပေါ့။အဖြေကိုတော့သိနိုင်မယ်ထင်လို့မပြောတော့ပါဘူး။
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဆိုတာဗုဒ္ဓ ဘာသာလို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ပါ။
2013/3/29 အေမီ <amizarhlaing@gmail.com>
ခွေးဆိုတာ ဟိုတစ်နေ့ညက ၂၈ လမ်း၊ တာမွေမအူကုန်း၊ ဘင်္ဂလီစု၊ ဒလ စတဲ့နေရာတွေမှာ ညပိုင်းလူသူအိပ်ချိန်မှာ အူကြဟောင်ကြတဲ့ ကောင်တွေကိုပြောတာလေ......ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာ...ဘယ်လိုအဆင့်မှာရောက်နေမှန်းမသိပဲနဲ့...ဆင်းပြောတွေ....တတ်ပြောတွေလာလုပ်နေသေးတယ်....စကားထဲကဇာတိပြဆိုသလို...ဘယ်လိုလူစား..ဘယ်လိုအဆင့်အတန်းဆိုတာ မမြင်ပဲနဲ့ပရိတ်သတ်ကတော့ သိကုန်ပြီ...မဟောင်ရင်အကောင်းသား...ဟောင်လိုက်မှခွေးမှန်းသိ ဆိုသလို ပေါ့....လူတွေဘက်ကဘယ်လောက်ပဲလူသားဆန်ပြနေပါစေ..ခွေးတွေဆိုတာတော့ အူမယ်..ဟောင်မယ်...ကိုက်မယ်...သူများအိမ်ကပ်နေမယ်...ခွေးရူးရောဂါဝင်လာရင် ခေါ်တင်ထားတဲ့ကျေးဇူးရှင်ကို ပြန်စော်ကားမယ်..ပြန်ကိုက်မယ်...ကိုက်လို့မရသေးရင် အူမယ်ဟောင်မယ်..ပေါ်တင်မဟောင်ရဲသေးရင် ....မမြင်ရတဲ့အွန်လိုင်းပေါ်ကနေဟောင်မယ်...လူယောင်ဆောင်ဟောင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်...ဘယ်လိုပဲလူယောင်ဆောင်ဆောင်...လူစကားမထွက်ပဲ...၀ုတ်ဝုတ်ပဲထွက်တယ်လေ...အဲဒီ့တော့ ဘယ်လိုရွှေပြည်အေးတရား...ဘယ်လိုအနုတရားတွေလာဟာဟောဟော...၀ုတ်ဝုတ်သံကင်းအောင် မဟောနိုင်မပြောနိုင်ရှာလေတဲ့သူတွေပါ..ထားလိုက်ကြပါ...ကျွန်တော်ပြောဖူးပါတယ်..ခွေးဟောင်တိုင်းတော့ ထမကြည့်တော့ဘူး..ကိုက်ဖို့ပြေးလာရင်တော့ အကုန်သာရိုက်သက်ပစ်ကြဟေ့.......